China akwụkwọ insole osisi rụpụta na Factory | Wode
Nha: Na-emekarị 1.00mx 1.50m ma ọ bụ dịka arịrịọ ndị ahịa si dị
Ogo: 555,001,517,608, ụdị dị iche iche maka nhọrọ
Arọ: Dabere na ogo na nha, pls kpọtụrụ anyị nkọwa
Ahịa: Ọnwa ọnwa, Eurotex
Mbukota: Mpempe akwụkwọ 25 kwa akpa
Ọ dịghị nrụrụ ga-eme n'ihi ụdị igwe ọkụ ma ọ bụ ọrụ okpomọkụ dị elu ndị ọzọ, kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ akpụkpọ ụkwụ akpaka.
Manly ji maka Ileba na akpa ụlọ ọrụ lining maka akpa na akpa akwa.
Juru n'ọnụ na mpịakọta ụdị, mpịakọta size na-abụkarị 36 "x50m ma ọ bụ 36" x100m na ​​dayameta bụ gburugburu 27cm. Ike Pee doro anya plastic akpa a na-eji abịa mpịakọta. Ejiri akpa dị ma ọ bụrụ na achọrọ.
1.High mma ya na ezi uche ahịa.
2.Anyị na-a attentiona ntị na obere obere nkọwa site na akụrụngwa na njikwa ihe dị iche na agba, ruo mgbe nnyefe na mgbe ọrụ ahịa.
3.Built silencer mgbanaka, nwere ike belata mkpọtụ mgbe Anam Udeme na ákwà mgbochi ahụ, ákwà mgbochi ahụ ọzọ lorịị.
1.We bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-etinye mgbalị niile nyocha, mmepụta, ahịa na ọrụ maka ndị ahịa anyị.
2.Anyị mechara sistemụ ire ere ahịa iji nweta nzaghachi site na iji ndị ahịa.
3.Directly ọkọnọ na mbụ aka factory price na ezi mma nkwa maka ndị ahịa.
4.Our isi akpụkpọ ụkwụ ihe ahịa bụ Europe, Middle East, South America, Southeast Asia na mpaghara ndị ọzọ.
1.Kedu ka m ga-esi mara ama karịa maka ngwaahịa gị?
A: E nwere ọtụtụ ụzọ: na-echegbu weebụsaịtị anyị, anyị nwekwara ike izipu gị broshuọ ngwaahịa Bekee anyị. Ndị ọzọ anyị ga-esonye na Canton Fair ma ọ bụ ngosi ndị ọzọ si mba ọzọ. Yabụ ị nwekwara ike ịga leta ụlọ ntu anyị. Daalụ. Maka ajụjụ ndị ọzọ, biko hapụ ozi na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo!
2.Q: Etu esi edobe gị na gị?
A5: Otu ụzọ bụ na ị nwere ike iziga anyị nkọwa ịzụta zụrụ gị site na Email ma ọ bụ Faksị, mgbe ahụ anyị nwere ike ịme akwụkwọ ọnụahịa maka gị, mgbe ahụ ị kwụrụ ụgwọ maka nkwụnye ego anyị, mgbe ahụ anyị haziri gị ngwaahịa. Wayzọ ọzọ bụ na ị nwere ike itinye iwu na ntanetị n'ịntanetị, nke nwere ike ịnye gị mkpuchi mkpuchi gị, ọ bụ nchekwa karịa, ebe enwere ndị ọzọ na-enye gị nkwa iji jide n'aka na ị ga-enweta ngwaahịa gị.
3.Can anyị nwere Logo ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ ka ebipụta na ngwaahịa gị ma ọ bụ ngwugwu gị?
A: Sure.Yogo Logo nwere ike itinye na ngwaahịa gị site na Hot zọ, Mbipụta, Embossing, UV mkpuchi, Silk ihuenyo Mbipụta ma ọ bụ ihennyapade.
Nke gara aga: Akpụkpọ ụkwụ Insole Shank Board
Osote: Akwụkwọ Insole Board maka Insole
1.75mm Akwụkwọ Insole Board N'ihi Shoes
2.0mm Akwụkwọ Insole Board Maka Akpụkpọ ụkwụ
Insole Akwụkwọ Board N'ihi Shoes
Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ Insole
Akwụkwọ Board Insole
Akwụkwọ Insole Board
Akwụkwọ Insole Board Na Eva
Akpụkpọ ụkwụ Insole Ihe Akwụkwọ Board Maka Akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ Insole Material Sheet, Agịga Punch Nonwoven Fabric, Nonwoven Fabric laminated na Eva ụfụfụ, Akwụkwọ Insole Board Na Eva, Achọpụghị akwa na Eva, Insole Board Na Eva,